Teboka vavaka Hivavaka rehefa miahiahy | TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Teboka vavaka Hivavaka rehefa miahiahy ianao
Androany isika dia hiatrika teboka vavaka hivavaka rehefa manahy ianao. Ny ahiahy dia toe-tsaina ratsy ara-psikolojika izay miteraka tahotra, fahatezerana na tsy fahafaham-po amin'ny zavatra, olana na olana mety hitranga. Zavatra ratsy ny manahy, tsy mahatonga ny mahita vahaolana ho avy io. Mpangalatra fifaliana ny manahy. Ny lehilahy manahy dia ho be fanahiana, tezitra, matahotra fotsiny, tsy hahalala fahasambarana.
I Elijah dia olona ara-Baiboly izay nanjary nitebiteby tamin'ny fotoana iray. Araka ny voalaza tetsy aloha, rehefa manahy be loatra ianao dia miteraka ilay olana izay tsy misy eo am-boalohany. Elia, na dia naneho fahatokisana ara-panahy lehibe teo imason'i Bala aza, dia mbola niafina ihany rehefa avy norahonan'i Jezebela. Tena reraka i Elià ka naniry ny hahatongavan'ny fahafatesana ho azy. Tsy tadidiny na tsapany akory fa mahay mamaha ny zava-miafina Andriamanitra rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra izy mba handray ny ainy ao amin'ny bokin'i 1 Mpanjaka 19: 4 Ampy izay ny Tompoko, hoy izy. Raiso ny aiko, tsy tsara noho ny razako aho.
I Joba dia lehilahy iray hafa miady amin'ny fahaketrahana noho ny famoizana azy. Namoy ny asany rehetra tao anatin'ny masony kely izy. Nanjary vovoka ny fanjakany ary voan'ny aretina mahatsiravina izy. Kivy tanteraka i Joba ka nanontany an 'Andriamanitra ny antony nitazonana azy hatramin'izao mba hamela azy hanana fiainana mahonena. Joba 3:11 Fa maninona tsy efa maty tany am-bohoka va aho ka maty toy ny nateraka hatrany am-bohoka? Ity no tantaran'ny lehilahy iray izay manahy noho ny toe-piainany ankehitriny. Vetivety izy dia nanadino fa ny fananany rehetra dia niaraka tamin'ny fanampian'Andriamanitra ary Andriamanitra dia afaka manao mihoatra lavitra noho izay azon'ny sain'ny olombelona atao.
Raha manahy momba ny zavatra iray ianao, dia tsy ampy ny mipetrapetraka sy manantena ny hahatongavan'ny farany. Tokony hanangana alitara fivavahana ianao hanohitra izay rehetra mampiahiahy anao. Mandidy aho amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra, izay rehetra mampidina ny ranomasonao amin'ny ranomasonao, dia hesorin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy izany.
Jesosy Tompo ô, misaotra anao aho noho ny fahasoavana nomenao ahy hahita andro vaovao. Misaotra anao aho noho ny fitahianao sy ny namelomanao ny fiainako, Tompo avelao hisandratra amin'ny anaranao Jesosy ny anaranao.
Tompoko, manolotra ny fiainako eo an-tananao aho, mivavaka aho mba hanampianao ahy amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainako izay mila fanampiana dia mivavaka aho mba hivoahan'ny fanampiana ho ahy amin'ny anaran'i Jesosy. Manopy ny masoko ho amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena ahy? Ny famonjena ahy dia avy amin'Andriamanitry ny lanitra sy ny tany. Tompoko, mivavaka aho mba handefasanao fanampiana ho ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, mivavaka aho mba ny toe-javatra rehetra mampitomany ahy dia mivavaka aminao mba hitondranao vahaolana amin'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, mivavaka aho mba hampianarinao ahy hahita anao mandrakariva miatrika olana sy fanamby. Tsy avelako ho lasa lehibe loatra ny olako ka tsy hekeko intsony ny herinao. Ampianaro aho hahita anao lehibe kokoa noho ny olako amin'ny anarana JESOA.
Jesosy Tompo ô, mivavaka aho mba hahitan'ny tananao ankavanana, izay manaitra ny fahatezerana, ho afaka amin'ny lavaky ny fahoriana izay natsipy aho. Mivavaka aho mba hamonjen'ny tananao ankavanana ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompo ô, ny soratra masina dia aza manahy fa amin'ny zavatra rehetra, fa amin'ny zava-drehetra, amin'ny alàlan'ny fitalahoana, vavaka sy fisaorana, ampahafantaro an'Andriamanitra. Mivavaka aho Jesosy Tompo mba hanaisotra ny fanahiana amiko. Manohitra ny fanahin'ny tahotra ato anatiko amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Tompoko, mivavaka aho mba hahazo fanasitranana mihoatra ny natiora ho an'ny fahasalamako efa mandroso. Ny teninao dia milaza fa nitondra ny aretinay rehetra teo aminao ianao ary nahasitrana ny aretinay rehetra. Mandidy ny amin'ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Ry JESOSY Tompo ô, mivavaka aho mba hanana fahasoavana matoky anao hatrany, afaho amin'ny Tompo aho amin'ny anaran'i Jesosy. Fa voasoratra hoe: Aza matahotra fa momba anao Aho; ary aza matahotra; fa Izaho no Andriamanitrao. Mivavaka aho mba hananan'ny zava-boahary, Tompoko, amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny teninao dia nampanantena fiadanako. Hoy ny soratra masina Fiadanako no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no homeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Mandà tsy ho sahirana amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Fa voasoratra izany, satria tsy nomen'Andriamanitra fanahin'ny tahotra isika fa hery, fitiavana ary saina madio, tsy manahy aho amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka aho mba ho tonga amiko ny fampiononanao, na dia ao anatin'ny eritreritra maro ao an-tsaiko amin'ny anaran'i Jesosy aza.
Tompo ô, matoky anao aho fa tsy ho menatra. Na dia mamakivaky ny lohasahan'ny aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra aho, satria eto amiko ianao, ny tsorakazonao sy ny tehinao, mampionona ahy ireo. Mivavaka aho mba hahazo fampiononana amin'ny fiovan'ny fiainana rehetra, omeo ahy amin'ny anaran'i Jesosy Jesosy.
Nampanantena tamin'ny teninao ianao fa miaraka amiko. Tsy mety manahy na inona na inona amin'ny anaran'i Jesosy aho. Tsy misy intsony ny fanaintainako, Jesosy no anarany fanahiana levon'ny ran'i Kristy sarobidy, ny tahotro nesorin'ny hery tamin'ny anaran'i Jesosy.
Fa ny teninao efa nampanantena fa hamonjy ahy ianao. Mivavaka aho mba hamonjy ahy ny tananao amin'ny fotoan-diako misavorovoro. Rehefa mandeha mamaky ny ranon'ny fiainana aho dia mivavaka aho mba homba ahy. Rehefa mikapoka ny rindrina ny lamosiko ary mirodana ny fanantenana rehetra, mivavaka aho mba ho fialofako amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraManinona ny mivavaka Ny vavaky ny Tompo dia fomba mandaitra mivavaka
Next lahatsoratraTENY SALAMO 5 HIVAVAKA HO AN'NY ZANAKAO AMIN'NY BEDTIME
Zava-bavaka mavitrika ho an'ny fankasitrahan'Andriamanitra
Teboka vavaka hanoherana ny lesoka amin'ny minisitra
Salamo 46 midika hoe andininy isaky ny andiany